Momba anay - Wuxi Flyt New Energy Technology Co., Ltd.
Izahay dia manolo-tena hanolotra ny mpanjifanay vokatra avo lenta sy serivisy mahafa-po.
Wuxi Flyt New Energy Technology Co., Ltd., dia mpanamboatra matihanina amin'ny rafitra turbine rivotra kely sy salantsalany ary kojakoja mifandraika amin'izany. Izahay dia nirotsaka tamin'ny fikarohana sy ny fampiharana turbines kely avy amin'ny100w-50kw nandritra ny taona maro. Toeram-panamboarana marobe manakaiky ny velaran-tany 1000 metatra toradroa no hita ao amin'ny tanànan'ny Wuxi, faritanin'i Jiangsu, 120 kilometatra miala an'i Shanghai ary 200 kilometatra miala an'i Nanjing, miaraka amina tambajotram-pitaterana mandeha amin'ny làlambe, làlambe, lalamby ary seranam-piaramanidina manodidina.
Ny orinasantsika izao dia manana mpiasa matihanina marobe, fanamboarana mandroso sy fanandramana, indrindra ny tionelin'ny rivotra izay afaka mamorona toe-javatra irina amin'ny fampiroboroboana sy ny fitsapana ireo vokatra ary nandritra ny taona maro dia namorona rafi-pandrafetana, famokarana, marketing, fametrahana, debugging. ary aorian'ny fivarotana. Ny turbine rivotra dia CE, ISO voamarina ary maro ireo patanty omena voninahitra. Ny zon'ny fananana tokana sy ny fiaraha-miasa lehibe amin'ny tsena iraisam-pirenena dia miresaka momba ny kalitao, ny fahamendrehana ary ny faharetan'ny vokatra. Manana tetikasa turbine rivotra manerana an'i Chine sy ampitan-dranomasina izahay izay raisina tsara avokoa.
Mpanamboatra ny vokatra vaovao haingana izahay.
Manome ny fomba fanamarinana ho an'ny mpamorona vokatra izahay;
Izahay dia mpanamboatra hanome fototra mahazatra.
Avelantsika ny mpanjifa hahatsapa ny traikefa lavorary amin'ny famolavolana, manampy azy ireo hahatratra ny sandany manokana.
Hifantoka tanteraka amin'ny fanatsarana ny ezaka ataon'ny mpanjifa izahay, hampitomboana ny sandan'ny mpanjifa.
laharam-pahamehana amin'ny serivisy
ny fanavaozana ny fandraisana andraikitra, sahy amin'ny fitrandrahana
ny kalitao sy mahomby
Ny kalitaon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia ny ain'ny orinasa, ary io koa no fototra iorenan'ny mpiasa tsirairay. Ataovy izay fara herinay hahatonga ny mpanjifa rehetra hanome fahafaham-po ny mpanjifa tsirairay, mba hatao tanteraka ny baiko tsirairay.
Mieritrereta misokatra, hevitra vaovao, mitady fomba vaovao, manohiza mandroso.
Tazomy ny fanoloran-tena ho an'ny matihanina, ny fiaraha-miasa, ny fanaovana asa tsara, lasa mpisava lalana amin'ny indostria.
Manatsara hatrany, mamorona vokatra avo lenta mihoatra ny andrasan'ny mpanjifa.
Mampiroborobo ny fahombiazany, mamaly haingana hatrany ny takian'ny mpanjifa.
Raiso ny mpanjifa ho ivony, ho an'ny fampandrosoana ny orinasa ho toy ny teboka fanombohana, miorina amin'ny tombotsoan'ny mpiasa, manatsara hatrany ny kalitaon'ny serivisy ho an'ny mpanjifa, hanome toerana malalaka kokoa ho an'ny fampandrosoana ho an'ny mpiasa orinasa, hahatratrarana ny mpanjifa, orinasa, mpiasa handresy- mandresy toe-javatra.